डा. केसीको यो अनसनलाई अन्त्य र अन्तिम बनाऔंः गगन थापा
केही माननीय सदस्यहरुले प्रश्न गर्नु भएको थियो कि, संसदको बैठकमा कांग्रेस किन उठिरहेको ? मैले उहाँहरुलाई भनें– ‘यदि कांग्रेस नउठेको भए डा. केसी सुतेको सुत्यै हुनुहुन्थयो । त्यही भएर कांग्रेस उठेको । नेपाली कांग्रेस उठेको उठ्यै गरेको थियो र आज सरकार गोविन्द केसीलाई उठाउन बाध्य भएको छ । नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
सामान्यतः सरकारले कानून बनाउने आवश्यकता महसुस गर्छ । संसद्मा विधेयक ल्याउँछ । हामी जनप्रतिनिधि त्यसमा काम गर्छौं र एउटा कानून बन्छ ।
तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयक सामान्य प्रक्रियाबाट आएन । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा भएको बेथितिलाई अन्त्य गर्नका लागि निरन्तर सघंर्ष गर्नुभएको अजात शत्रु डा. गोविन्द केसीको सघंर्षबाट एउटा प्राज्ञिक संयन्त्र बन्यो । माथेमाले नेतृत्व गर्नु भयो । त्यो लामो सघंर्षको बीचमा अनेकै सरकारसँग सम्झौता भयो । कति पालना भए कति पालना भएनन् ।
अन्ततः एउटा कानून बनाउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यो कानून यो भन्दा अगाडिको ससंदले सर्व–सहमतिबाट बनाउन सकेन । पूर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालमा सोही सम्झौता अनुसार माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा अध्यादेश जारी भयो । यो अध्यादेश बनाउने बेलामा नै आज सरकारले जुन सम्झौता गरेको छ, त्यसको पालना गरेको भए आज यसको आवश्यकता पर्दैन थियो ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने बेलामा यो सम्झौता गरिदिएको भए यो अनसन हुने थिएन, तर, त्यसो भएन । जे भएको छ, अहिले आएर ठीक भएको छ । माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ– जित–हारको बिषय नबनाऔं । हामी यसलाई जित हारको विषय बनाउन चाहदैनौं । मुख्य बैरी भनेजस्तै केही छुच्चा अभिव्यक्ति आज बिहान पनि प्रकट भएका छन् ।
यस बीचमा वार्तालाई भाँड्ने षड्न्यत्र भयो भनेर केही दिनसम्म मेरै बारेमा चर्चा भए । मलाई यसको बारेमा चर्चा गर्नु छैन । तर, आज मैले सुने संसदीय दलको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले नेपाली कांग्रेसको बारेमा बोल्नु भएको छ– कांग्रेसले भाँड्ने षड्न्यत्र गर्दै छ । र, हामीले बचायौं।
बधाई छ तपाईहरुलाई !
यस बीचमा शेर बहादुर देउवाले पटक पटक माननीय शेर बहादुर देउवाले भन्नु भएको म सम्झन्छु । सरकारलाई सहमतिका निम्ति पुग्नको लागि सहयोग गरौँ । गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको कुरा महत्वपूर्ण हो । डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट वार्तामा जाने साथीहरुलाई विधेयक फिर्ता नलिने बेलासम्म वार्ता हँुदैन भन्ने ठाउँबाट यो विधेयक फिर्ता लिने प्रसंग उठाउनु भयो भने यो कहिल्यै समझदारीमा पुग्दैन । सरकारको पनि प्रतिष्ठा छ । संसदको पनि मयार्दा छ । त्यसैले विधेयक फिर्ता लिने कुरा छोड्दिनुस् । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको कन्टेन्टमा छलफल गर्नुस् र सम्झौतामा पुग्नुहोस् भनेर पहिलो पटक भन्ने मान्छे हो म । र, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कन्टेन्टमा तयार हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई ट्रस्ट गनुहोस् । प्रक्रियाको बारेमा मिलाउन सकिन्छ भन्ने मानिस हो हामी ।
मैले यहाँ बोल्दै गर्दा भनेको थिएँ, डा. गोविन्द केसी जोगी हो । कांग्रेस होइन, नबनाउनुहोस् कांग्रेस । कसैको झोला बोक्ने मानिस होइन । अन्तमा गएर गोविन्द केसीसंग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियाैं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पाखुरा बटारेर सत्याग्रह हुन्छ ? भन्नु भयो ।
केही साथीले बोल्दै गर्दा देश निकाला गर्नुपर्छ भन्नु भयो । केही साथीले अधिनायकवादी भन्नुभयो । कति साथीले लडाकुको भेसमा आइस् भनेर भन्नु भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त आज सम्झौता गर्नु भयो । सबले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर, माननीय सदस्यहरुले बोल्नु भएको कुरा रेर्कडमा छ । जसले हिजो भन्नु भयो– को हो गोविन्द केसी ? गोविन्द केसी दलाल हो । गोविन्द केसी अधिनायकवादी हो । गोविन्द केसी षड्न्यत्रकारी हो । यसले बाहिर मान्छे पठाउँछ जस्ता यो सदनमा धेरै कुराहरु भनिएको छ । त्यसैले म सम्माननीय सभामुखज्यूसँग म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि, भोलि यो विषयमाथि पनि संदनमा छलफल हुन्छ ।
भोलि फेरि कतिपय कोणबाट अहिले भएको सम्झौता विपरीत संशोधन प्रस्तावहरु हाल्नु भन्ने कुराहरु आउला । र, माननीयज्यूहरुले हाल्नु होला । तल–माथि भयो भने फेरि संघर्ष हुन्छ । फेरि सम्झौता हुन्छ । त्यसमा संलग्न भएका माननीयलज्यूले दुःख पाउनु हुन्छ । त्यसैले यसमा केही नलगाउँ ।
मैले सुरुमा भन्दै आएको थिए, कन्टेन्टमा कुरा गरौँ । १० बर्ष मेडिकल कलेज काठमाडौंमा नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयलाई पाँचवटा भन्दा बढी सम्बन्धन नदिने । यसो गर्दा नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा फाइदा मात्र हुन्छ ।
यस बीचमा षन्ड्न्त्रकारी, भडुवा आदि शब्द प्रयोग गरेर लखेट्ने काम भयो । तर, केही फरक परेन । आखिरमा आएर जित सत्यकै भयो । त्यही कुरामा आएर सम्झौता गर्नु पर्यो । त्यही कुरा मान्नु पर्यो ।
एउटै विषयको निम्ति पटक पटक अनसन बस्ने कुरा त्यो व्यक्तिको निम्ति लाजको विषय होकि हाम्रो लागि लाजको विषय हो ?
सम्माननीय सभामुखज्यू यो प्रश्न सरकारको निम्ति मात्र होइन । हिजो हामी सरकारमा बसेकाका लागि पनि हो । र, भोलि सरकारमा बस्न चाहनेको लागि पनि हो । एउटै व्यक्ति अनसन बस्छ । हामी सम्झौता गर्छौं । तर, पालना गरिरहेका छैनौं । त्यसैले यसपटक म सरकारलाई धन्यवाद दिएर धेरै कुरा भन्न चाहन्न । यो पटकको अनसनको श्रृखंलालाई नै अन्त्य र अन्तिम बनाउँ ।
आज जे कुरा सरकारको तर्फबाट ससंदमा पेश गरिएको छ, हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं । हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं कि, आजको सदनमा जेकुरा माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ । किनकि, हामी संसद्माथि विश्वास गर्छौं । हामी सबैको सामूहिक विवेकले हाम्रा निम्ति उठेका प्रश्नहरुको उत्तर हामी यो पटक फेरि हार्न दिँदैनौँ । डा. गोविन्द केसीलाई हार्न दिन्नौं र हामी आफू पनि हार्दैनौं । जे सम्झौता भएको छ, त्यो सम्झौता भए अनुरुप सरकारले पनि त्यसको जिम्मा लिनेछ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले यसको जिम्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिन्छ । नेपाली कांग्रेस चाहिँ आफैं हिजो यही अध्यादेशको रुपमा गएर आएकाले नैतिक रुपमा बाधिँएको छ । काग्रेसको यससंग सघंर्ष जोडिएको छ ।
सरकारले आज गरेको यो सम्झौतालाई ससंद्बाट लिएर जाने कुराहरुमा नेपाली कांग्रेस शत प्रतिशत यसको सहयोगीको रुपमा रहन्छ । कांग्रेसले खोजेको यही मात्र हो । कांग्रेसले न सदन अड्काउन खाजेको हो, न यसको बहानामा सरकारमाथि दुःख सिर्जना गर्ने खोजेको हो । सरकारले आफ्नो दुःख आफैं बिसायो ।
सम्माननीय सभामुख महोदय ! मैले जुन विरोधको सूचना राखेको थिएँ । विरोधको सूचना राख्नुपर्ने परिस्थित थियो । आज जसले जति जे भने पनि त्यो विरोधको सूचनाको लडाइँ नभएको भए, संसदमा यो लडाइँ नभएको भए आज बाहिर भनिएको जस्तो आन्दोलनले यो संशोधनको प्रक्रियाबाट डा. केसीले गरेका सम्झौताहरु कानुनका विषय बन्ने थिएनन् ।
यो क्षणमा सरकारलाई विश्वास गर्दै, यो क्षणमा सिंगो संसद्लाई विश्वास गर्दै, सरकारले गरेको सम्झदारी अनुरुपका विषयहरु संसदीय प्रक्रियाको बाटोबाट राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकको अशं बन्छ भने विश्वास गर्दै, मैले र आफूले राखेको विरोधको सूचना फिर्ता लिन्छु ।
(नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन थापाले प्रतिनिधिसभामा गरेकाे सम्बोधनलार्इ यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे हाे ।)
परीक्षा जनताले लिने हो, रिपोर्ट कार्ड हामी पेश गर्छौंः गगन थापा
गगन थापाकाे प्रश्न: यो कस्तो लम्पसारवाद हो ? यो कस्तो चाकरी हो ?